Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.3.2.3 Non-omele
Imithombo Ababili non-representativeness kukhona imiphakathi ehlukene kanye amaphethini ehlukene ukusetshenziswa.
Idatha Big bavame ukuba ehlelekile nganhlanye ngezindlela ezimbili eziyinhloko. Lokhu sokukhulumisana akufanele inkinga yonke uhlobo analysis, kodwa ngoba abanye ukuhlaziya kungaba iphutha elingathí sina.
Umthombo wokuqala sokuchema esihleliwe wukuthi abantu athumba kuvamise kungoni yonke ephelele yazo zonke abantu noma isampula okungahleliwe kusuka kunoma iyiphi labantu ethize. Ngokwesibonelo, baseMelika Twitter akuzona isampula okungahleliwe baseMelika (Hargittai 2015) . Umthombo wesibili sokuchema ehlelekile wukuthi abaningi big idatha izinhlelo wayohlasela izenzo, futhi abanye abantu bayanikela izenzo eziningi ngaphezu kwabanye. Ngokwesibonelo, abanye abantu on Twitter nomthelela emakhulwini Tweets izikhathi ezingaphezu kuka abanye. Ngakho-ke, izenzakalo on a platform othize kungaba naphakade ayehlome ngaphezulu kutjengisa subgroups ezithile ukwedlula yesikhulumi uqobo.
Ngokuvamile abacwaningi bafuna ukwazi okuningi mayelana idatha abanalo. Kodwa, uma kubhekwa isimo non-omele idatha big, kuyasiza futhi flip ukucabanga kwakho. Udinga ukwazi okuningi mayelana idatha awunayo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma idatha awunayo kukhona ehlelekile ezahlukene kusukela idatha ukuthi akudingeki. Ngokwesibonelo, uma unayo amarekhodi ucingo luvela enkampanini umakhalekhukhwini amazwe asathuthuka, kufanele ucabange nje mayelana nabantu kudathasethi bakho, kodwa futhi mayelana nabantu abangase babe mpofu kakhulu ukuba ngumnikazi mobile phone. Ngaphezu kwalokho, eSahlukweni 3, sizobe ufunde mayelana nendlela silinganiso Unganika amandla abacwaningi ukuba basho lezo zilinganiso okungcono idatha non-omele.